Cunsurigii ugu weynaa UK iyo kuxigeenkiisa oo isaga baxay ururka EDL | Somaliska
Ninkii hogaamiyaha u ahaa ururka cunsuriyiinta EDL ee ugu weyn UK oo lagu magacaabo Tommy Robinson ayaa ku dhawaaqay in uu isaga baxay ururkaas, isagoo sabab ugu dhigay in uu ururkaas noqday mid aad xagjir u ah. Waxaa sidoo kale ururka isaga baxay ku xigeenkiisa Kevin Carroll.
Arinta xiisaha leh ayaa ah in ninkaan uu xiriir la sameeyay urur lagu magacaabo Quilliam oo ah urur ay leeyihiin koox Muslimiin ah oo u taagan la dagaalanka xagjirnimada. Ka dib wadahadalo iyo tashkiilin u socotay muddo ayaa waxaa Tommy Robinson ay ka dhaadhiciyeen in uu isaga baxo ururka EDL. Arintaan ayaa qaasatan waxaa ka dambeeyay nin lagu magacaabo Usama Hasan oo ka mid ahaa ururkii Mujaahidiinta ee Ruushka ka saaray Afghanistaan.
Si kastaba ha ahaatee, Tommy Robinson ayaa sheegay in uu sii wadi doonaa ka hortaga waxa uu ugu yeeray Islaamiyiinta xagjirka ah balse waxa uu sheegay in uusan ka qeyb qaadan doonin cambaareynta iyo la dagaalanka Muslimiinta oo dhan, taasoo uu sheegay in ururkiisa uu noqday mid kala saari waayay.
Arintaan ayaa dhabarjab iyo dharbaaxo weyn ku noqotay dhamaan cunsuriyiinta Yurub iyo dhamaan reer galbeedka oo ninkaan aad u jeclaa. Xitaa waxa uu sanadkii hore yimid Sweden, isagoo ururka cunsuriyiinta SD ay marti qaadeen.
Waa in lagu farxo waliba inuu muslimo aya ka sii fiicneyd allaa hanuunka lehe.
Maasha allaah waa war lagu farxo in cunsurigii ugu weynaa uu soo yara dhowaaday, insha allaahu ilahay waxan uga baryeynaa inuu soo hanuuniyo oo uu diinta islaamka qaato.
October 12, 2013 at 17:11
manshalaah sxb waan ku farax naay waa nin ad iyo ad u fcn asaago fahmay waxyabaha asaga u fcn iyo wax yabaha an u fcny tas waa miid farxads galinaysa umada ajnabiga ah ee ku nol wadamada qarad europe o dhaan yaa allah saas xaqa u wada tuus galada